Iimpawu Zendoda yaseCapricorn Ethandweni: Ukusuka kwiintloni ukuya kwinto engathandekiyo yothando - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana Iimpawu Zendoda yaseCapricorn Ethandweni: Ukusuka kwiintloni ukuya kwinto engathandekiyo yothando
Iimpawu Zendoda yaseCapricorn Ethandweni: Ukusuka kwiintloni ukuya kwinto engathandekiyo yothando
Ukhetho lothando lwendoda yaseCapricorn alubonakali lunengqondo. Unomdla okhethekileyo ngendlela isithandwa sakhe esijongeka ngayo, kwaye ujonga isimilo ngononophelo ngaphambi kokuba azimisele komnye umntu.
Indlela ehamba nendoda yakho yaseCapricorn inokuba nzima kwaye inzima. Uya kufuneka uhambisane namandla akhe omsebenzi, kwaye ukwazi ukuhlala kwindawo ethile kwinqanaba le-hierarchic. Konke kuxhomekeke apho akhoyo neli nqanaba.
Enamabhongo, lo mfo ubeka ubomi bakhe ekuhlaleni ephezulu kwaye anakekele abantu abamngqongileyo. Unabahlobo abambalwa abayixabisayo nabathandayo, kwaye uya kulindela ukuba iqabane lakhe lomphefumlo lamkele aba bantu ebomini bakhe.
Ukuthandana kuye kuseti lwamava athe wagqitha kuwo. Ukuba uthandana naye, fumana ukuba uya kuzama kwaye abone ukuba ulunge kangakanani ebomini bakhe nakwishedyuli. Akukho malunga nomzuzu wangoku kunye nendlela oyiphembelela ngayo. Imalunga nendlela oza kuba kuyo kwixesha elide, njengomfazi, isithandwa kunye nomama. Uceba yonke into ngononophelo, kwaye ufuna iqabane ukuze izinto zisebenze.
yintoni u-februwari 26 uphawu lwe-zodiac
Xa esemathandweni, indoda yaseCapricorn yenza ngendlela engaqhelekanga. Akaziqondi kakuhle ezakhe iimvakalelo, ke uya kudideka. Oku kungadlula kwakamsinya nje kubudlelwane bokuqala awabuphela.
Okanye nje ukuba owesibini enze. Okanye ayinakuze ihambe, kwaye uya kuhlala emangalisiwe yimvakalelo yothando.
Ukuba ufuna ukuphumelela intliziyo yomntu, kufuneka afunde ngakumbi. Ukuba uthando analo luyafana, uya kuhlala engoyena mntu ngonaphakade. Unenkani kwaye uzinzile, uneemvakalelo ezinzulu kodwa akazazi. Engathandi ukuba ungaphezulu, yonke into ayenzayo iya kuba nzulu.
Xa ethanda, le ndoda ithanda ngentliziyo yayo yonke. Kodwa unzima kakhulu. Akukho mntu unokuba nzima ukuba naye. Ngqongqo, unolindelo lokuba bambalwa abantu abaya kuba nakho ukuhlangabezana nalo.
Xa esalinde uthando lwakhe lokwenene, uya kuba nenkani ukuyifumana, kwaye ngekhe enze naluphi na ulalwaniso. Uninzi lwabafazi luya kumfuna kuba kunzima ukufumana. Bambona njengomceli mngeni, umntu ekufuneka bevulile kwaye bazityhilele ilizwe.
Xa esothandweni, uya kwenza nantoni na ukuze iqabane lakhe lonwabe kwaye loneliseke. Uya kuba kunye nomfazi amthandayo ngonaphakade, kwaye akukho nto iya kuguqula ingqondo yakhe ngaye.
Enentloni kwaye edityanisiwe, indoda yaseCapricorn iya kuba nomonde eluthandweni. Ucinga ngobudlelwane bezothando njengento ayityala kuyo ixesha elide.
Uwa eluthandweni ngokukhawuleza, kodwa akasayi kwenza nto ngaphambi kokuba ahlolisise ukuba umntu amthandayo ulungile kuye okanye akunjalo.
Lo mfo ufuna umfazi onobuntu obomeleleyo kunye nezinto ezifanayo kuye. Akayi kuthandana nomntu omhle kuphela.
Kuya kufuneka abe namanenekazi akrelekrele kwaye aqiniswe kwinyani. Awusoze umbone enomfazi kwizithende eziphakamileyo kwaye enetoni yokwenza. Le asiyondlela yakhe.
Intombazana elungileyo kuye iya kutyala iimvakalelo ezifanayo kubudlelwane, kwaye iya kukulungela ukubeka inzame ngakumbi ukwenza izinto zisebenze. Akathandi ukudlala imidlalo kwaye ulindele ukuba iqabane lakhe lifane.
Ukuqonda indoda yakho yaseCapricorn
Unokufumanisa ukuba kunzima ukuqonda indoda yaseCapricorn. Uhlala ebonakala ekude kwaye egcinwe, kwaye ugxeka wonke umntu nayo yonke into ngengqondo yakhe enengqondo.
yintoni umntu we-sagittarius ayifunayo kumfazi
Phantsi emhlabeni, iCapricorn iya kuhlala ibona into eyinyani, ishiye abanye ukuba baphuphe. Ulunge kakhulu kwishishini, njengoko ehlalutya izinto ngengqondo ebandayo kwaye engaze aphuphe emini.
Ukulungele ukwenza inyathelo elilandelayo kwaye uthathe lomceli mngeni ulandelayo, lo mfo ulumkile ukuba angenzi nto kunye ne-Universe ukuguqula izinto ngokuchasene naye.
Uhlala enemisebenzi emihle, ekwizikhundla eziphezulu njenge-CEO, igqwetha elidumileyo okanye umpheki omangalisayo. Kwaye le yimisebenzi embalwa kuphela anokuyenza. Ukuzimisela kunye nenjongo, angenza nantoni na ayifunayo. Imiqobo yobomi ayinakuba yingxaki kuye.
Uyakwazi ukuqikelela iimvakalelo neengcinga zendoda yaseCapricorn ngokulula kakhulu. Iinjongo zakhe eziphambili ebomini kukuba nomsebenzi ophumeleleyo kunye nokufumana umfazi olungileyo. Uzinikele kakhulu kwaye uyimveli.
Ngaphezu koku, akaze amkele izimvo zabanye. Lo mfo ufuna umfazi aza kuchitha naye ubomi bakhe bonke, umntu onokumqonda nokumthanda. Iswiti, uya kuyenza nayiphi na intombazana iwile ekwenzeni uthando awaziyo.
I-capricorn kwi-cusp ye-aquarius
Ukulawula yenye yezona zinto alunge kakhulu kuzo, ke unikela ingqalelo enkulu kule nto ayenzayo. Uneenjongo ezininzi eziza kufezekiswa ngaphandle komzamo ongako. Ufuna ukukhuselwa ekonzakalisweni, ke uya kwakha iindonga zokumngqinga, angavumeli mntu ukuba angene.
Uya kuzama ukwenza iqabane alikhethileyo lonwabe, kwaye okwangoku uza kusebenza kulonwabo lwakhe kwicandelo lomsebenzi nakubomi bakhe boluntu. Kuququzelelwe, lo mfo uhlala eyi-CEO yenkampani okanye umnini ozingcayo weshishini eliyimpumelelo.
Uyinkokeli elungileyo kwaye unengqondo ehlalutya ngokwaneleyo ukuba abe ngugqirha okanye injineli. Ukhetha ukuhlala ekhaya kunokuya emathekweni. Iziganeko zomsebenzi okanye abaxhasi bengxowa-mali yesisa abamkhathazi, kodwa ufuna nje ukunqanda ingxolo kunye nezihlwele.
Akunjalo konke konke, uya kufuna umfazi ogcinwe kwaye elula. Akajongi imbonakalo, kodwa isimilo kunye nobukrelekrele. Ukuba ungumntu oneenjongo zakhe kwaye ukulungele ukunceda umntu afezekise eyakhe, kuya kufuneka ujonge indoda yaseCapricorn. Yiba nesibindi kwaye ube nolondolozo oluncinci, kwaye uya kukuthanda.
Imihla yendoda yaseCapricorn iya kulunga. Uya kuthatha iqabane lakhe kwiindawo azithandayo, uya kuhlonipha umfazi ahamba naye, uya kumsa ekhaya, abambe iingcango kwaye atsale izitulo.
Uyayazi indlela yokusebenzisa ubuchule, ubuhle kunye nokuziphatha kakuhle. Ngaphandle koko, ikwangule ndoda eyomeleleyo eyayiqondayo into eyifunayo ebomini, kwaye engoyiki ukuyifumana.
Ukuba usuku lokuqala kunye nendoda yaseCapricorn, yithanda kwaye uyixabise yonke into eyenzayo. Kodwa okwangoku, gcina imfihlakalo kunye nomgama. Icala elingalunganga lendoda yaseCapricorn
Ukuphelelwa lithemba yenye yeempawu eziphambili ezingathandekiyo zomntu waseCapricorn. Njengokuba egqithisile, lo mfo uya kuhlala ecinga ukuba akawenzi owona msebenzi ubalaseleyo, nokuba usemathandweni.
Kwaye ngamanye amaxesha uphelelwa lithemba, uhlala ecaphukisa esi simo sakhe sengqondo. Elinye icala elibi lomlinganiswa wakhe kukuqaqadeka.
Uthanda kuphela into ayithandayo, wenza izinto ngendlela enye kuphela kwaye yiyo loo nto. Ukuba awuvumelani naye, ukhetha ukungamameli. Uya kuhlala ebambekile kwindlela enza ngayo izinto kwaye ecinga ngayo iimeko, kwaye uyakukholelwa ukuba nguye kuphela owenza izinto ngokufanelekileyo. Oku kunokubacaphukisa abantu.
Kwaye olokugqibela uphawu olubi yiintloni zakhe. Unako ukugcinwa kakhulu, ngakumbi ekuqaleni, xa engafane azibandakanye nomnye umntu.
Oku kunokwenza ukuba abanye abantu basetyhini bacinge ukuba akanamdla. Ukuba uye wamthanda kwaye awuyiqondi into eqhubekayo, fumana ukuba indoda yakho yaseCapricorn inentloni nje.
Mgcine kufutshane kwaye unike ngakumbi ngeempawu zakho. Ngokukhawuleza xa uza kumfumana, uya konwaba ngokupheleleyo ngendlela aza kusebenza ngokungadinwa ngayo ukuze wonwabe.
Kukho ukudideka okuninzi malunga nesini sendoda yaseCapricorn. Ukuba ngumqondiso wokuphakanyiswa ovela eMars, uya kuba namandla ezesondo ngokwaneleyo ukwanelisa nkqu neqabane lakhe elona nyathelo liphezulu.
Ulawulwa nguSaturn, uya kwenza uthando olunentsingiselo, olunzulu, kwaye akazukutyhila ubuchule bakhe bokwenyani kude kube ubudlelwane buqinile kwaye buphelele.
Ngamanye amagama, liqabane elinamandla lesini elifuna intsingiselo kunye neemvakalelo ukuze libonise izakhono zakhe ebhedini.
Indoda yaseCapricorn: Iimpawu eziphambili kuThando, uMsebenzi kunye noBomi
Ukuthandana nomntu waseCapricorn: Ngaba unayo into eyenzayo?
Luthini uphawu lwe-zodiac lwangoNovemba 24
Ngaba amadoda aseCapricorn anomona kwaye anamandla?
Isini sikaCapricorn: Izinto ezibalulekileyo kwiCapricorn ebhedini
IScorpio ngoFebruwari 2021 iHososcope yenyanga
Umbala kaLeo: Kutheni iGolide ineyona Mpembelelo ilungileyo
Umqondiso weZodiac ka-Agasti 23
Scorpio kunye nokuhambelana komhlobo ne-aquarius
Kutheni le nto ii-capricorn zikhawuleza ukuba nomsindo
amadoda omhlaza alwenza njani uqhekeko
Uphawu lweZodiac lwangoSeptemba 30
yintoni i-zodiac ngo-septemba 12